त्रुटि देखिएपछि होन्डा गाडी, मोटरसाइकल र स्कुटर फिर्ता, नेपालमा के हुन्छ? Demo Khabar: Voice for freedom,fight and Right
‘एभिएटर डिस्क नेपालमा छैन। त्योबाहेक बाँकी ३ मोडलका पाटपूर्जा हामी निःशुल्क परिवर्तन गरिदिन्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसका लागि भारतबाट प्राविधिक टोली आउँदै छ। उनीहरूले हाम्रा प्राविधिकलाई सबै सिकाउनेछन्। अनि हामी घोषणा गरेर ग्राहकलाई बोलाउँछौं।’ सबै मोटरसाइकल-स्कुटरमा ती समस्या नभएको श्रेष्ठले दावी गरे। ‘त्यो समयका मोटरसाइकल-स्कुटर सबै बिकिसकेका छैनन्। बिक्री भएका सबैमा समस्या पनि छैन,' उनले भने। कम्पनीले 'बिग्रेको' सवारीसाधन दिएका खण्डमा ग्राहकले कस्तो क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छ त? यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तीर्थराज खनालका अनुसार यसबारे कुनै व्यवस्था छैन।
इराकी प्रधानमन्त्री अमेरिका जाँदै : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भेट्ने
नेकपाका स्थायी समिति सदस्य विभाजित : 'निर्णय फिर्ता गर्न माग'
कोरोनाविरुद्ध सरकारको तयारी प्रभावकारी, थप २४० आईसीयू बेड थपिदै
प्रधानमन्त्रीद्वारा रामजन्मभूमि अयोध्यापुरीसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा श्रीलंकाका प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपक्षलाई बधाई ज्ञापन